एक राम्रो सौन्दर्य दिनचर्या को लागी आवश्यक कदम | बेजिया
टोय टोरेस | 11/09/2021 20:00 | सुन्दरता
एक राम्रो सौन्दर्य दिनचर्या को लागी आवश्यक छ स्वस्थ र सुन्दर छालाको आनन्द लिनुहोस्। तर आज त्यहाँ कस्मेटिक्स मा यति धेरै उत्पादनहरु र यति धेरै विविधताहरु छन्, कि यो अभिभूत वा गलत ठाउँमा लाग्नु सामान्य कुरा हो। पनी, धेरै मानिसहरु लाई आवृत्ति को रूप मा संदेह छ, उत्पादनहरु को उपयोगिता र उनीहरुलाई लागू गर्न को लागी सही आदेश।
तर यो पनी केहि हैन कि केवल युवा व्यक्तिहरु लाई प्रभावित गर्दछ वा जो एक सौन्दर्य दिनचर्या को पालन नगरेको छ। यहाँ सम्म कि सबैभन्दा विशेषज्ञ को बारे मा संदेह हुन सक्छ, किनकि आज त्यहाँ छाला को हेरचाह मा जानकारी को एक धेरै छ, तर यो सधैं सबैको लागी सुलभ छैन। यहाँ हामी तपाइँ उनीहरु के हो देखाउन एक राम्रो सौन्दर्य दिनचर्या शुरू गर्न को लागी आवश्यक कदम.
1 सौन्दर्य दिनचर्या, दिन को, रात मा र यदि तपाइँ मेकअप लगाउन छैन
1.1 मेकअप संग वा बिना सफाई
सौन्दर्य दिनचर्या, दिन को, रात मा र यदि तपाइँ मेकअप लगाउन छैन
तपाइँको छाला हरेक दिन सफाई एक राम्रो सौन्दर्य दिनचर्या मा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कदम हो, चाहे तपाइँ मेकअप प्रयोग गर्नुहोस् वा नगर्नुहोस्। जब तपाइँ मेकअप लगाउनुहुन्छ यो आवश्यकताहरु लाई पत्ता लगाउन सजिलो छ छाला को, किनभने उत्पादनहरु दिन को समयमा oxidize र एक सुत्न अघि सबै उत्पादनहरु लाई हटाउन को लागी आवश्यकता महसुस गर्दछ। तर जब तपाइँ मेकअप लगाउनु हुन्न, यो अनुहार सफाई को प्रकार्य हेर्न को लागी अधिक गाह्रो हुन सक्छ।
जे होस्, यो एक राम्रो सौन्दर्य दिनचर्या को लागी मात्र महत्त्वपूर्ण छ, किनकि दिन को समयमा छाला प्रदूषण, धूल र बाहिरी एजेन्टहरु कि छाला को राम्रो स्वास्थ्य को लागी खतरा अवशोषित गर्दछ। केहि सरल चरणहरु संग तपाइँ यो फोहोर हटाउन सक्नुहुन्छ ताकि अनुहार को छाला सास फेर्न र रात को समयमा पुनर्जीवित गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले, एक राम्रो सौन्दर्य दिनचर्या को लागी पहिलो आवश्यक कदम सफाई हो.
मेकअप संग वा बिना सफाई
यदि तपाइँ बोक्नुहुन्छ मेकअप तपाइँ उत्पादनहरु लाई हटाउन को लागी विशिष्ट कस्मेटिक्स को उपयोग गर्न को लागी हुनेछ। यो एक प्रयोग गर्न को लागी सबै भन्दा राम्रो छ सफा दूध र एक आँखा मेकअप हटाउने, किनकि उनीहरु अनुहार र आँखा को छाला संग अधिक नाजुक र सम्मानजनक छन्। जब तपाइँ कुनै मेकअप छैन, मात्र एक micellar पानी को उपयोग गर्नुहोस्। कुनै पनी अवस्थामा, एक हल्का साबुन संग सफाई समाप्त, parabens वा सिलिकॉन बिना।
यो अन्तिम चरण जरूरी छ किनकि न त micellar पानी, न मेकअप रिमूभर दूध, न त कुनै विशिष्ट कस्मेटिक छाला बाट उत्पादनहरु को अवशेषहरु लाई पुरा तरिकाले हटाउन सक्छ, उनीहरु अवशेषहरु छोड्छन्। साबुन र पानी संग तपाइँ एक राम्रो सफाई समाप्त हुनेछ। अरु के छ त, साबुन र पानी बिहान को पहिलो कदम हो, सौन्दर्य दिनचर्या संग जारी राख्नु अघि।
सफाई र हाइड्रेशन बीच तपाइँ तपाइँको सौन्दर्य दिनचर्या मा अन्य चरणहरु सामेल गर्न सक्नुहुन्छ, तर यदि तपाइँसँग समय छैन वा तपाइँ भर्खरै सौन्दर्य दिनचर्या को दुनिया मा शुरू गरीएको छ, यो सबै भन्दा राम्रो छ आवश्यक कदमहरु संग शुरू गर्न को लागी। यदि तपाइँ आफ्नो अनुहार हेरचाह को विस्तार वा सुधार गर्न चाहानुहुन्छ, तपाइँ टोनर कि छाला सफाई पछि लागू गरीन्छ र अन्य उत्पादनहरु लाई लागू गर्नु अघि जोड्न सक्नुहुन्छ।
सीरम एक अतिरिक्त हाइड्रेशन हो कि मॉइस्चराइजर भन्दा पहिले लागू हुन्छ र यदि तपाइँ सुक्खा, परिपक्व छाला छ वा केहि अतिरिक्त हेरचाह को आवश्यकता छ, तपाइँ बिहान र रात मा सीरम को केहि बूँदहरु लागू गर्न सक्नुहुन्छ। जे होस्, यी कदमहरु सख्त आवश्यक छैन र यसैले एक आधारभूत सौन्दर्य दिनचर्या हुनेछ के मा शामिल छैनन्। यसको लागि, केवल सफाई र हाइड्रेशन आवश्यक छ।
अब, छाला moisturizing दुबै युवा र परिपक्व छाला को लागी आवश्यक छ। किनकि यो समय भन्दा पहिले बुढ्यौली र गरीब अनुहार छाला स्वास्थ्य बाट बच्न को लागी महत्वपूर्ण छ। तपाइँको मॉइस्चराइजर किन्नु भन्दा पहिले राम्रो सल्लाह पाउनुहोस्, किनकि प्रत्येक छाला को विशिष्ट आवश्यकताहरु छन्। हो साँच्चै, बिहान र राती, सधैं सफाई पछि आफ्नो अनुहार moisturizer लागू गर्नुहोस्.
एक आधारभूत सौन्दर्य दिनचर्या समाप्त गर्न, आँखा समोच्च नबिर्सनुहोस्। तपाइँ आफ्नो आँखा को वरिपरि अतिरिक्त नाजुक छाला को हेरचाह शुरू गर्न को लागी कहिल्यै जवान हुनुहुन्न। यो मात्र एक अधिक मिनेट लिनेछ र तपाइँ त्यस क्षेत्रमा समय भन्दा पहिले बुढेसकाल बाट बच्न सक्नुहुन्छ। यी सरल चरणहरु संग, तपाइँ मात्र केहि मिनेट मा उज्यालो, युवा र स्वस्थ छाला हुनेछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » सुन्दरता » एक राम्रो सौन्दर्य दिनचर्या को लागी आवश्यक कदम